သင့် Android Device မှာ Face Unlock ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
1787 Shares 734 Views
သင့် Android Device မှာ Face Unlock ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ?
Ko Thuya Mar 06, 2018
Apple က iPhone X မှာ Face ID အမည်ရ မျက်နှာအာရုံခံ နည်းပညာကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို စွမ်းရည်ဟာ Android Device များမှာ ရရှိနေတာ နှစ်များစွာ ကြာနေပါပြီ။ Android 4.1 နဲ့ သူ့အထက်မှာ ဒီစွမ်းရည်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ အဲဒီ စွမ်းရည် မပါရှိရင်လည်း စွမ်းရည်ကောင်းတဲ့ Fac Unlock Apps များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ Face Unlock ကို အသုံးပြုနည်း
သင့်ဖုန်းရဲ့ Settings> Security > Smart Lock ထဲသွားပါ။ PIN ထည့်ခိုင်းရင် ထည့်ပေးပါ။
Trusted Face ကို နှိပ်ပြီး ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်ဖုန်းက Face Unlock ဟာ PIN လောက်စိတ်မချရဘူးလို့ သတိပေးမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ သင့် မျက်နှာကို Scan လုပ်ပါ။ သင့်မျက်နှာကို ကင်မရာနဲ့ တည့်မတ်တဲ့ နေရာမှာ ထားပါ။ အလင်းရောင်ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ Scan ပြုလုပ်ပါ။ သင့် မျက်နှာရဲ့ အသေးစိတ်ကို ကင်မရာက မြင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပါ။
Facial Recognition ကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။
သင့် ဖုန်းရဲ့ Facial Recognition ကို ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Trusted Face ကဏ္ဍအောက်မှ Improve Face-Matching ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သင့်မျက်နှာကို ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် Scan လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင့် ဖုန်းက သင့်မျက်နှာကို ပိုမို ကောင်းစွာ မှတ်မိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Face Unlock Apps
သင့် Android မှာ Trusted Face မပါရင်လည်း Face Unlock Apps များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Apps များက သင့် မျက်နှာဖြင့် ဖုန်းကို Unlock လုပ်ပေးနိုင်သလို Apps များကိုလည်း Face Unlock ဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Apps များထဲမှာ ညွှန်းချင်တာက IObit Applock ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ Face Unlocker ပါပါတယ်။ သူက သင့်ဖုန်းရဲ့ Lock Screen ကိုသာမက Apps များကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြတဲ့ Android မှ Face Unlock သို့မဟုတ် Trusted Face နဲ့ Apps များရဲ့ စွမ်းရည်ဟာ iPhone X ရဲ့ Face ID လောက် စွမ်းရည် မမြင့်မားတာကို သတိပြုပါ။ အဲဒီအတွက် Android မှာ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးမယ်ဆိုရင် လုံခြုံမှု အားနည်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံများဖြင့် အခြား လူက သင့်ဖုန်းအား Unlock လုပ်ခြင်း၊ ရုပ်တူသူ တစ်ယောက်က သင့်ဖုန်းအား Unlock လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
Ref : maketecheasier
သငျ့ Android Device မှာ Face Unlock ကို ဘယျလို သုံးမလဲ ?
Apple က iPhone X မှာ Face ID အမညျရ မကျြနှာအာရုံခံ နညျးပညာကို ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီလို စှမျးရညျဟာ Android Device မြားမှာ ရရှိနတော နှဈမြားစှာ ကွာနပေါပွီ။ Android 4.1 နဲ့ သူ့အထကျမှာ ဒီစှမျးရညျကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ သငျ့ဖုနျးမှာ အဲဒီ စှမျးရညျ မပါရှိရငျလညျး စှမျးရညျကောငျးတဲ့ Fac Unlock Apps မြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ဖုနျးမှာ Face Unlock ကို အသုံးပွုနညျး
သငျ့ဖုနျးရဲ့ Settings> Security > Smart Lock ထဲသှားပါ။ PIN ထညျ့ခိုငျးရငျ ထညျ့ပေးပါ။
Trusted Face ကို နှိပျပွီး ညှနျကွားခကျြအတိုငျး လုပျဆောငျပါ။
သငျ့ဖုနျးက Face Unlock ဟာ PIN လောကျစိတျမခရြဘူးလို့ သတိပေးမှာပါ။ ပွီးရငျတော့ သငျ့ မကျြနှာကို Scan လုပျပါ။ သငျ့မကျြနှာကို ကငျမရာနဲ့ တညျ့မတျတဲ့ နရောမှာ ထားပါ။ အလငျးရောငျကောငျးတဲ့ နရောမှာ Scan ပွုလုပျပါ။ သငျ့ မကျြနှာရဲ့ အသေးစိတျကို ကငျမရာက မွငျနိုငျအောငျ ပွုလုပျပါ။
Facial Recognition ကို ပိုမို ကောငျးမှနျအောငျ ပွုလုပျပါ။
သငျ့ ဖုနျးရဲ့ Facial Recognition ကို ပိုမို တိုးတကျကောငျးမှနျအောငျလညျး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ Trusted Face ကဏ်ဍအောကျမှ Improve Face-Matching ကို နှိပျပါ။ ပွီးရငျ ညှနျကွားခကျြအတိုငျး သငျ့မကျြနှာကို ပုံစံ အမြိုးမြိုးဖွငျ့ Scan လုပျပါ။ ဒါဆိုရငျ သငျ့ ဖုနျးက သငျ့မကျြနှာကို ပိုမို ကောငျးစှာ မှတျမိစမှော ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ Android မှာ Trusted Face မပါရငျလညျး Face Unlock Apps မြားကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အဲဒီ Apps မြားက သငျ့ မကျြနှာဖွငျ့ ဖုနျးကို Unlock လုပျပေးနိုငျသလို Apps မြားကိုလညျး Face Unlock ဖွငျ့ ကာကှယျပေးထားနိုငျပါတယျ။ အဲဒီ Apps မြားထဲမှာ ညှနျးခငျြတာက IObit Applock ဖွဈပွီး သူ့မှာ Face Unlocker ပါပါတယျ။ သူက သငျ့ဖုနျးရဲ့ Lock Screen ကိုသာမက Apps မြားကိုပါ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ယခုဖျောပွတဲ့ Android မှ Face Unlock သို့မဟုတျ Trusted Face နဲ့ Apps မြားရဲ့ စှမျးရညျဟာ iPhone X ရဲ့ Face ID လောကျ စှမျးရညျ မမွငျ့မားတာကို သတိပွုပါ။ အဲဒီအတှကျ Android မှာ ဒီလုပျဆောငျခကျြကို သုံးမယျဆိုရငျ လုံခွုံမှု အားနညျးပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ဓါတျပုံမြားဖွငျ့ အခွား လူက သငျ့ဖုနျးအား Unlock လုပျခွငျး၊ ရုပျတူသူ တဈယောကျက သငျ့ဖုနျးအား Unlock လုပျခွငျးမြား ပွုလုပျကောငျး ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။
Android AppFace Unlock
၂၀၁၈ မှာ Huawei ကနေ ဘာဖုန်းတွေထွက်ရှိလာနိုင်မလဲ?
စမတ် စိပ်ပုတီးကို ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Acer
အသစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ 10.5-inch iPad Air နဲ့ 7.9-inch iPad mini
Apple က iPad မော်ဒယ်သစ်နှစ်မျိုးကို တိတ်တဆိတ် မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ တတိယမျိုးဆက် 10.5-inch iPad Air နဲ့ ပဉ္စမမျိုးဆက် 7.9-inch iPad mini ပါ။ iPad Air အသစ်မှာ 10.5-inch Retina Display အသစ်…
900 shares277 views
118 shares22 views